Deg Deg:Puntland Oo Ciidan Amar Gaar ah Qaba U dirtay Badhan – KHAATUMO NEWS
Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Puntland, oo maalmo ka hor gaaray degmada Badhan, ayaa si rasmiya loogu wareejiyay Amniga degmadaas.
Booliiska magaalada Badhan ayaa Shaqada laga fariisiyay, waxaana Ciidanka Daraawiishta lagu amray in ay hawlgal xooggan ka bilaaban gudaha magaalada, si loo xaqiijiyo Amniga oo muddooyinkii u dambeeyay habacsanaan laga dareemay.
Ciidanka waxa sidoo kale lagu amray in ay magaalada ka nadiifiyaan astaamaha maamulka Somaliland, islamarkaana ay xabsiga dhigaan, haddii cid ka tirsan Somaliland isku dayo in ay soo gasho gudaha degmada Badhan.
Sidoo kale, waxa Ciidanka la faray in ay si adag ula dagaallaman dadka ka ganacsada maandooriyaha, gaar ahaanna Khamriga kuwaas oo mudooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada Badhan.
Previous Post: Fadeexad weyn: Dhaqaalle Xoogan Oo Bilkasta Barlamaanka Soomaaliya iyo Shaqaalaha Dawladu Siiyan Alshabaab.
Next Post: Deg Deg::Dawlada Somalia Shuruud Adag ku xidhay Jubaland iyo Puntland,
ninbaa yidhi walee samkaab baan deero dilin markaad aragtaan somaliland in ay hawshii ay lahayd ka gaadhay sanaag bari ayaad waxooga maryo calas ah ku soo ururinaysaan badhan haddii dagaal dhacana waad yaacdaan oo waxba iskama celisaan puntland waa fulay somaliland ka baqda meeday adhicadeeye meeday laascaanood meeday ganbadha meeday tukaraq meeday xalin gardho ayaa loo jiraa 15 kilo.
Badhan waa magaalo niman daaroodnimadu ku weyntahay. Iidoorow isdaba qabta oo durbaanka Faysal faaruq idiin tumayo ka waantooba dhulkiinu ha idin deeqo inta dawlada Soomaaliyeed idiim imanayso oo muuse jaahil laga soo xirayo
Xididnimadii iyo seedinimadii miyey shaqayn weydey
masaajidka ciyaarta ka dhaafa budhland
maqli jirey. ciidanka maska cuna,ciidanka dalaaydaha ku boodaaa bbnbbbbbbnbb ,iyo qaar koloo badan waxba kuma tartaaan kkkkk